Usuku lwe-Afrika ngo-2020: INDLELA Yabantu abadumileyo beFave babhiyozelwa kwiSitayile
INyanga ye-Fave yethu ibhiyozele njani uSuku lwe-2020
AUsuku lwe-frica olwalusaziwa ngokuba luSuku lweNkululeko ye-Afrika kunye noSuku lweMfazwe yaseAfrika ngumbhiyozo wonyaka wokusekwa koMbutho woBumbano lwe-Afrika nge-25 kaMeyi ngo-1963. Olu suku lubhiyozelwa kulo lonke elaseAfrika, ngokunjalo nangama-Afrika kwihlabathi liphela.
Kwi-Afrika ngo-2020, umxholo wawukho "Ukuthulisa izibhamu: Ukudala iimeko ezifanelekileyo zokuPhuhlisa i-Afrika kunye nokomeleza umlo wokulwa isifo se-COVID-19." Ngenxa yobhubhani we-coronavirus, uninzi lwemibhiyozo yoSuku lwe-Afrika yayilulungelelwaniso lokuthotyelwa kwamanyathelo okuhamba koluntu ekuhlaleni kunye nokuvalwa kwelizwe okunyanzeliswe kumazwe amaninzi ase-Afrika.
Esona siganeko sikhulu sakha senzeka Ikonsathi yoNcedo lweSuku lwe-Afrika eKhaya, ibanjwe ngu Idris Elba. Ikhonsathi ibonisiwe Angélique Kidjo, Sauti Sol, Burna Boy, AKA, kunye nabanye abaninzi kwaye besasazwa kumaqonga eMTV Base ngeenjongo zokunyusa imali yokunceda kumlo oqhubekayo wokulwa ne-COVID-19 e-Afrika.
Ngokumanyeneyo, abantu abadumileyo base-Afrika kunye nabaphembeleli abaphezulu bathabatha kumaphepha abo e-Instagram ukuze babelane ngokujonga okubonakalisa ubuhle babo nenkcubeko yase-Afrika. Abantu abaNtu abahloniphekileyo bathanda i-supermodel NoNaomi Campbell Ubuyele kwisibhengezo seendaba zosasazo lwentlalo
Ukusuka kwizixhobo zokunxiba ukuya kwizihombisi eziqaqambileyo kunye nezixhobo ezimibalabala, aba badumileyo kunye neempembelelo ngokuqinisekileyo babonisa ukuthanda ilizwe.
Nantsi indlela ubuntu bethu befave obubhiyozela ngayo uSuku lwe-2020…
UStephanie Coker Aderinokun
Kwizinto zakutshanje zefashoni, indlela yokuphila nenkcubeko, silandele ku-Instagram @StyleRave_ Usuku lwe-Afrika 2020 Iindaba zamva nje namhlanje
Usuku lwe-Afrika Usuku lwe-Afrika ngo-2020 AKA Angelique Kidjo Ayanda Thabethe Boity Thulo Bozoma Saint John Burna Boy Okufumaneka i-hamamat Idris Elba NguNandi Madida NoNaomi Campbell Nomzamo Mbatha omotola jalade-ekeinde Pearl Modiadie rita Dominic Sauti Sol UStephanie Coker Aderinokun UVenita Akpofure
titi Dokubo Ngamana 27, 2020